Cameron.....: February 2012
Posted by coral nyo at 05:26 16 comments:
ခေါက်ဆွဲကြော်စားချင်နေတာ ဒီတနင်္ဂနွေလုပ်စားဖြစ်တယ်.....။ ခါတိုင်းကြော်နေကျ ဂေါ်ဖီထုပ်တွေ မုန်ညင်းတွေမထည့်တော့ဘဲ ကြက်ဥနဲ့ ပဲငံပြာရည် ကြက်သားမှုန့်ဆီနဲ့နယ်ထားနဲ့ ခေါက်ဆွဲကိုအရင်မွှေပြီး ခနဘေးဖယ်ထားတယ် ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ် ကြက်သားလေးကြော်ပြီး ခေါက်ဆွဲပြန်ထည့်တယ် ကူးချိုင်(ကြက်သွန်မှိတ်)လေးဖြူးလိုက်တယ် ဒါပါပဲ လွယ်တယ်...။ သူ့နဲ့တွဲဖက်ဖို့ Clear Soup တစ်ခွက်လုပ်လိုက်တယ်...။ ကြက်သားမှုန့်ရည်ဆူဆူထဲကို ကြက်သားလုံးထည့် မုန်လာဥနီထည့် ငရုတ်ကောင်းထည့် အိုးချတော့ ပဲကြာဇံလေးနဲနဲခတ်လိုက်တယ်...။ အချဉ်ကိုတော့ မုန်လာဥနီခြစ်ထားတာကို နှမ်းဆီလေးသုံးလေးစက်နဲ့ ရှာလကာရည် ဆားလေးဖြူးပြီးနယ်ထားတယ် မွှေးမွှေးချဉ်ချဉ်လေး...။ ဟင်းရည်ကြည်ကြည်လေးကို ပူပူလေးတွဲသောက်..... ကောင်း၏.....။
Posted by coral nyo at 23:08 12 comments:
သူမ မျက်ဝန်းတို့ သည်
စိမ်း လဲ့ညို လို့ 
ကိုယ့် ရင်တွေ ဖိုစေသည်။
သူမ အပြုံးတို့ သည်
လင်း လက် တောက်ပ
သူမ လက်ကလေးတို့ သည်
သူမ လှမ်းတဲ့ 
သူမ ဆံကေသာတို့ သည်
လေတွင် လွင့် ဝဲ့
သူမ အသံတို့ သည်
အဲဒီညက သူမ ယူသွားခဲ့ သည်။
Posted by coral nyo at 00:229comments:
Posted by coral nyo at 00:15 12 comments:
သာမီးရဲ့ အိုင်ပက်ပေါ်မှာ လျှောက်ခြစ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ......။ အမှန်တော့ ပုံတွေမဆွဲတတ်ပါဘူး...။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆေးရောင်လှလှခြယ်ကြမယ်ဆိုသလိုပဲ အရောင်လေးခြယ်ထားရုံသက်သက်ပါ....။
Posted by coral nyo at 01:33 11 comments:
တစ်နှစ်တုန်းက အမေရိကားကခဏအလည်ပြန်လာတဲ့ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲလေးတစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့တာ....။ သူကတွေ့တွေ့ခြင်း “အစ်မ သမီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ” လို့ပြောတော့ ကြားကြားချင်း စိတ်ထဲ ဘယ်လိုကြည်နူးဝမ်းသာသွားမှန်းမသိဘူး...မျက်ရည်တွေဘာတွေတောင်ဝဲသွားတယ်...ပြောမပြတတ်ဘူး...။ ကိုယ်တောင်အဲလောက်ခံစားမိတာ မိခင်လောင်းဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီညီမလေးကိုယ်တိုင်ဆို ဘယ်လောက်ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်လိုက်မလဲ ကြည်နူးပီတိဖြစ်လိုက်မလဲ..။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က ပြာသိုလပြည့်နေ့ အမေနေ့လဲဖြစ်တယ်...။ အမေနေ့မှာ မိခင်လောင်းတစ်ယောက်ဆီက ခုလိုမင်္ဂလာစကားကြားခဲ့လိုက်ရတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ....။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လ ၂၃ မှာသားယောက်ကျားလေးမွေးတယ်....။ မွေးမွေးချင်းပဲ ကလေးလေးက ဖဘမှာတင်ခံရတယ်...။ မိခင်ကိုယ်တိုင်လဲ ဆေးရုံပေါ်မှာ ဖဘပေါ်နဲ့ အပ်ဒိတ်အဆက်မပျက်ရှိနေတာ..။ သူများနိုင်ငံများတိုးတက်တယ်ပြောပါတယ်...။ ခုဒီညီမ၀မ်းကွဲက ဖေဘက်ကတော်တာ....။ အဖေ့ဘက်က ၀မ်းကွဲတွေ လေးဆယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ အကုန်မမြင်ဖူးဘူး...။
ဒါက အစချီလိုက်တာ ခု..အမေဘက်က ၀မ်းကွဲညီမလေးတစ်ယောက်ဖဘမှာ တင်ထားတယ်“I am pregnant ” တဲ့ မောင်နှမတွေ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ congratulation လာရေးလိုက်ကြတာဆို....။ ဒီညီမကတော့ ပထမသမီးလေးတစ်ယောက်မွေးထားပြီးသား...။ ကိုယ်တို့အမေဘက်မှာ ပထမဦးဆုံးအိမ်ထောင်ကျတဲ့ ၀မ်းကွဲညီမလေးပေါ့....။ တူလေးလား တူမလေးလားမသိ နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့် ကလေးလေးကို အားလုံးက ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုနေကြတယ်...။ ကိုယ်ကခေးလေးတွေသိပ်ချစ်တာ...ကိုယ်တိုင်မွေးဖို့ကျတော့ အချိန်နောက်ကျနေပြီလေ....။ ဒီတော့ သူများကလေးတွေကိုပဲချစ်ရတာပေါ့.....။ မီးနဲ့ခေးလေးများ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ဖဘ ဖိုတိုအမ်ဘမ်ထဲမှာတင်ထားတာအများကြီးပါ လာကြည့်လို့ရတယ်...။
စာကြွင်း။ ။ တစ်ဝမ်းကွဲညီမလေးသဲသဲက သမီးလေးရထားပြီးပြီဆိုတော့ ခုကိုယ်ဝန်လေးက သားသားလေးဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ သားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက် ဒါကြောင့် ဘေဘီဘွိုင်းပုံလေးကို အကြိုနိမိတ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....။
Posted by coral nyo at 01:086comments:
ပန်းရောင်တီရှပ်၊ အသဲပုံလေးက ခေါင်းစည်းကြိုး၊ အပေါ်က အလှခါးပတ်လေး
အကျီင်္မှာတော့ One Boy Friend is Not Enough တဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့.....တော့...တော့........
နောက်ဆုံးဝတ်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်... ခါးမြင့်စကဒ်တွေပြန်ခေတ်ထနေတယ်...
ခုက ဘောင်းဘီစကပ်... အနောက်က ရှုံ့ကြိုးနဲ့ဆိုတော့ ခါးဆိုဒ်မလိုဘူး လူတိုင်းဝတ်လို့ရတယ်..။
အဲဒီဆိုင်မှာ နှစ်ရောင်ပဲရှိတာ နှစ်ထည်လုံးမလာလိုက်တယ် အကျီင်္လေးတွေက ခါးတိုလေးတွေ...။ သရေပိုက်ဆံအိတ်လေးက အရောင်လိုက်ဖက်အောင်အ၀ါလေးရွေးယူလိုက်တာ ...။
ဘောလ်ပင်လေး ခဲတံလေးထည့်ဖို့ ပန်းနုရောင်ယုန်ကလေး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်
ဒါလေးကတော့ ၀ယ်ထားတာနဲနဲကြာပြီ ခုတလောပန်းရောင်လေးတွေကြိုက်နေလို့
ပန်းရောင် Brazil Sandal
Posted by coral nyo at 03:16 18 comments:
ပ န်းကလေးေ မွှးမြ မြ
ေ န ခြည်အောက် မှာ
လ န်းဆ န်းလို့ ဝေ ဆာ
ရ နံ့တွေ ထုံ အီ သ င်းတာမို့
န မ်းခဲ့ မိ တ ယ် ပ န်းေ လးရ ယ်
ေ လပြေ အ လာဘ ယ် ညာယိ မ်းလို့
ေ ရှာင် ဖ ယ် ကာမ သွား ပါ နဲ့
ဒီမောင် သာဆွ တ် ခူးလို့  ယူ င င်
တ ယု တ ယ နဲ့ မြ တ် နိုးပါ့  မ ယ်
နွ မ်းေ ခြာက် ကာသွား လ ည်း
ရ နံ့ ကလေးေ မွှးမြ မြ
ထာဝ ရ သိ မ်းထား ပါ့ မ ယ် ။
Posted by coral nyo at 09:22 10 comments:
ပန်းနုရောင် နှင်းဆီလေးက ရှက်သွေးဖြာလို့ စကား တစ်ခွန်း...ကိုယ်စား ခစားခဲ့ တယ်....။
အဲဒီပန်းနုရောင် နှင်းဆီလေးထဲမှာ သူ့ အပေါ်ချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းတွေပျော်ဝင်စီး မျောနေခဲ့ တယ်.....။
နူးညံ့တဲ့အကြင်နာတွေလဲ အပြည့်စွန်းထင်းနေကြတယ်......။
မွှေးပျံ့ တဲ့ ချစ်ခြင်းရနံ့ တွေနဲ့ လဲ ထုံအီနေစေခဲ့ တယ်......။
ကိုယ့် ကို နူးညံ့လှပတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ချစ်တတ်လာအောင်ချစ်သူက သင်ပေးခဲ့ တာလေ....။
ကိုယ်တိုင်က စိတ်ကူးယဉ်တွေနဲ့ သာယဉ်ပါးခဲ့ သူမို့ကိုယ့်ပြုမူသမျှတွေဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့ ဘဝနဲ့ ဆန့် ကျင်သလိုလဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ စိတ်ကူးတွေနဲ့ သာ ချစ်ခဲ့ ရသူမို့စိတ်ကူးယဉ်ဘဝမှာပဲအချစ်တွေက ပိုမိုလှပနေမလားပေါ့ ....။
သူပေးခဲ့ တဲ့ နှလုံးသားနုနုကလဲ ပန်းနုရောင်လေးလေ.....။ စွန်းထင်းသွားမှာလဲ ကြောက်မိတယ်။ ချစ်တတ်ကြသူအချင်းချင်းမို့ရင်ခုန်သံတွေနီးခဲ့ တာလဲအဆန်းမှ မဟုတ်တာပဲလေ.....။
ကံကြမ္မာတစ်ဆစ်ချိုး.......ဝေးဖို့သူကအစပျိုးခဲ့ ရင်တောင် သူပေးခဲ့ တဲ့ ပန်းနုရောင်နှလုံးသား ရင်ခွင်အခန်းထဲ ခပ်ဖွဖွလေး သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါ့မယ်။(ကျွန်မ၏ကဗျာဆရာ)
မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကဗျာဆရာဆီက ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့မိပေမယ့် တကယ်တမ်းသူက မရေးစဖူး အက်ဆေးအတိုလေးတစ်ပုဒ်ရေးပေးခဲ့တယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်လှတဲ့စာကိုဖန်းဆင်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါ....။
Posted by coral nyo at 09:56 11 comments:
(တကယ်တမ်း ကိုယ်မျှော်လင့်မိတာက ကိုယ့်ရဲ့ ကဗျာဆရာဆီက ကဗျာချိုချိုလေးတစ်ပုဒ်ပါ)
ကိုယ်အမြဲပြောဖူးတဲ့စကားလေးရှိတယ် ကိုယ်ကသိပ်နုတာ အသည်းတောင်မှ ပန်းရောင်လေး လို့လေ....။
ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ သဘာဝအသားရောင်နဲ့ ပန်းနုရောင်လေးတွေကိုခရေဇီဖြစ်နေတယ်....။
ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် baby pink လေးတွေရွေးဝယ်ဖြစ်တယ်....။
ချစ်သူများနေ့ကို ကိုယ့်တစ်သက်မှာ သိပ်ပြီးနင့်နင့်နဲနဲမခံစားခဲ့ရဖူးဘူး...။ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေ့လို့လဲ မသတ်မှတ်ခဲ့မိဘူး...။ ဗယ်လင်တိုင်းမ်ဟာ ကိုယ့်အတွက်ရင်ခုန်စရာနေ့ရက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူး.....။ တကယ်တမ်းတော့ ချစ်တတ်သူတိုင်းအတွက် Valentine's Day ဟာ သက်ဆိုင်ပါတယ်..။
ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ တစ်ယောက်တည်းရှိနေလို့လဲ အထီးကျန်ဆန်တယ်လို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး...။ တစ်ယောက်တစ်နေရာဆီအဝေးရောက်နေတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက်ပြောပါတယ်...။ ချစ်ခြင်းညီမျှရင် အသဲနှလုံးတစ်စုံဟာ နီးနီးကပ်ကပ်လေးရှိနေမယ်လို့ နွေးထွေးရင်ခုန်စွာခံစားသိရှိနိုင်မှာပါ...။ လတ်ဆတ်စွာမွှေးမြနေမယ့် ပန်းနုရောင်နှင်းဆီရနံ့လေးတွေကိုရနေမှာပါ....။
ကဲ...အားလုံးပဲ ♥♥♥♥♥ Be Your Valentine ♥♥♥♥♥ ပါရှင်.......
ဒီနေ့လေးကို ဘာပို့စ်မှမတင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် စီဘောက်မှာလာအော်သွားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ထာဝရပိတ်သတ်ကြီးကြောင့် ကောက်ကာငင်ကာ အက်ဆေးတိုလေးကို ရေးလိုက်ရပါကြောင်း.....။
Posted by coral nyo at 05:11 13 comments:
Posted by coral nyo at 03:20 11 comments:
Posted by coral nyo at 12:59 10 comments:
အမှန်တော့ ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူရှိသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလှလှလေးတွေကို ဂူဂယ်လ်ကနေရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....။ ချစ်တတ်သူတိုင်း စိတ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ....။
Posted by coral nyo at 23:01 14 comments:
ရန်ကုန်ဆောင်းက မအေးရတဲ့အထဲ အဆင်မပြေမှု စိတ်တိုင်းမကျမှုတွေနဲ့ လူကပိုပြီး အိုက်စပ်စပ်နိုင်လွန်းလှတယ်...။ ဒီမနက် ကိုးနာရီမှာချိန်းထားတဲ့ အင်တာဗျူး....။ ကျွန်တော့်ကပဲ သူတို့မေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်လောက်အောင်ညံ့ဖျင်းနေသလား မပြောတတ်တော့....။ ကျွန်တော့်အတွက် ညဖက် ကော်ဖီဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုလို့ရတာလေးနဲ့ အခန်းငှားခ စားရေး သောက်ရေး မဖူလုံလို့ နေ့အလုပ်ကိုရှာနေတာ...။ အဆင်မပြေဘူးဗျာ....။
အင်တာဗျူးရှိရာကနေ မြေနီကုန်းကားဂိတ်ဆီကို လမ်းလျှောက်လာလိုက်တယ်...။ ဘယ်ဆက်သွားရမလဲ စဉ်းစားမရတာနဲ့ မြို့ထဲက တိုက်ခန်းကိုပဲ ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်...။ စိတ်ကညစ်ညစ်နဲ့ လူစည်ကားတဲ့ နေရာကို မသွားချင်လဲသွားရဦးမယ်...။ အိုက်စပ်ပြီး စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ...။ မြို့ထဲကို ဘယ်ကားစီးစီး ရောက်တာမို့ ချောင်တဲ့ ကားစီးဖို့စောင့်လိုက်တယ်...။ လာသမျှကလဲ ငါးချဉ်သိပ် ကျပ်ပိတ်ညှပ်သတ်နေတာချည်းပဲ...။ မတတ်နိုင် လူများလည်းဒီကားစီးမှမြန်မြန်အိမ်ရောက်မှာ...။ နေရာလည်းရနိုင်မယ်ထင်ရတဲ့ အထူးကားတစ်စီးပေးတက်လိုက်တယ်...။ အထူးကားသာပြောတယ် နေရာကပြည့်လို့ မတ်တပ်ရပ်သူကရပ်ရတာပါပဲ....။ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့....။ ရှေ့ခန်းဖက်ကို တိုးဝင်လိုက်တယ်။ ကားစထွက်ပြီး မီးပွိုင့်မှာမိတော့ အရှေ့ဖက်ကို ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တာ....။ ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းထဲကို အလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားတယ်...။
ဒရိုင်ဘာနောက်ကျောက စတီးတိုင်ကိုကျောပေးပြီး ကျွန်တော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားမှာ နတ်သမီးလေးတစ်ပါး....။ ဘုရားရေ..... ဒီလောက်လှပချောမောတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ကျွန်တော့်တစ်သက် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့တာသေချာပါတယ်....။ ကျွန်တော်က ကားရှေ့ဖက်ကိုလှမ်းအကြည့် တစ်ယောက်ယောက်ကိုစကားပြောရင်း ရယ်မောနေတဲ့ သူမနဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံသွားတယ်....။ ကျွန်တော်နဲ့မသိပေမယ့် သူမက ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြုံးပြသလိုမျိုး အသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့ အမူအရာမျိုးကိုခံစားလိုက်ရတယ်....။ တကယ်ဆို တခြားမိန်းကလေးတွေသာဆို သူတို့နဲမျက်လုံးချင်းဆိုင်သွားရင် ချက်ချင်းအကြည့်လွဲပစ်တတ်တာများတယ်... ကံဆိုးရင် မျက်စောင်းထိုးပါခံရမယ်....။ သူမကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး...။
အသားအရေလေးက ၀င်းလက်ကြည်စင်လို့ နက်ပြာရောင် ကချင်မနောတိုင်အဆင်နဲ့ ၀မ်းဆက်လေးဝတ်ထားတယ်...။ အကျီင်္ကရင်ဖုံးလက်ပျက်လေးမို့ လက်မောင်းသားတွေက ဆင်စွယ်ရောင်ပေါက်နေတယ်...။ ဒီလိုမျက်ဝန်းအိမ်မျိုးကို ကျွန်တော်သိပ်သဘောကျတာ...။ ဗာဒံစေ့ပုံ ဘေးတိုက်အလျားရှည်မျောမျောမျက်အိမ်ကို မဲနက်တဲ့ မျက်တောင်ရှည်ရှည်ကော့ကော့တွေနဲ့ ၀န်းရံထားတော့ မျက်ဆံနက်နက်တွေက တောက်ပလို့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေလိုပဲ...။ မျက်ခုံးမွှေးတွေက နက်နက်စိပ်စိပ် ခပ်ထူထူကွေးကျသွားပုံလေးက သိပ်လှတာပဲ...။ နှာတံစင်းစင်း သန္တာရောင်တောက်နေတဲ့ ဆေးရောင်ကူမထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေ...။ စောစောက ကျွန်တော့်ကို သွားလေးတွေပေါ်အောင်ပြုံးပြတာများ ပုလဲလုံးလေးတွေစီထားသလိုပဲ...။ အိုဗျာ... ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်လှတဲ့အလှမျိုး...။ ဒဏ္ဍာရီထဲက နတ်မိမယ်တွေကို မမြင်ဖူးပေမယ့် စာတွေထဲမှာ ဖွဲ့နွဲ့ထားသလို အလှမျိုးထက်ပိုမယ်ထင်ပါတယ်...။ ဆံကေသာပိတုန်းရောင်ဆိုတာ သူမဆံပင်တွေကမှ အစစ်...။ ဆံပင်တော်တော်ရှည်မယ့်ပုံလို့ ခန့်မှန်းမိတယ်...။ နောက်တွဲလေးထုံးထားတာ အထုံးတော်တော်ကြီးတယ်...။ သူမရှေ့က သူမနဲ့စကားပြောနေတဲ့ အမျိုးသားက စကားပြောရင်း သူမဆံပင်ကို ညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်လိုက်သေးတယ်...။ သူ...သူတို့က ချစ်သူတွေပေါ့.... ဟုတ်လား...။
ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုမျိုးမှန်းမသိဘူးဗျာ...။ ကျွန်တော့ဘ၀မှာတစ်ခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ ခံစားမှုလေး...။ သေချာတာတော့ ကျွန်တော်သူမကို မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတာပဲ....။ တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ သူမဘေးနားက သူမပိုင်ရှင်ကြောင့် ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကလေးပဲ အသည်းကွဲသွားပါတယ်...။ သူမကိုကြည့်ပြီး...ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ Jame Blunt ဆိုထားတဲ့ “You Beautiful” သီချင်းကို ချက်ချင်းကြားယောင်မိသွားတယ်...။ သီချင်းစာသားထဲကအတိုင်း အခုအပြင်မှာ ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာလေဗျာ...။ အဲဒီသီချင်းက ကျွန်တော်မကြာခဏဆိုနေကျ သီချင်းလေး...။ခုမှ သီချင်းအဓိပ္ပါယ်လေးက ပိုပြီးပီပြင်လေးနက်လာတယ်....။
ကဲ ... ဘယ်သူတွေကများ ကျွန်တော့်လိုအဖြစ်မျိုးကြုံဖူးမလဲ...။ မိနစ်ပိုင်း စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေး ချစ်မိသွားတယ်.... ပြီးတော့ စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာပဲ အသည်းတွေ ကွဲကြေရတယ်ဗျာ...။ ဒီနေ့က ကျွန်တော့်အပေါ် ဘယ်လို ကံကြမ္မာဆိုးတွေများကျရောက်ရသလဲ...။ ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာသင်ပေးဖူးတဲ့ စကားပုံလေးကို သတိရသွားတယ်...။ “Misfortune is never come alone, its come one after one” တဲ့....။နောက်ထပ် ဘယ်လိုကြမ္မာမျိုးထပ်ရောက်လာဦးမလဲ....။ အလုပ်လည်းမရ အသည်းလဲကွဲ...။ လူကို ခန္ဓာအားဖြင့် ထိခိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ ကြမ္မာဆိုးကျရောက်နေတယ်...။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲလား...။ နောက်ထပ်ဘယ်မှာ ထပ်ဆုံတွေ့နိုင်ဦးမလဲဆိုတာ မသေချာမရေရာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးပါဗျာ....။ တချက်တချက် ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်တဲ့ သူမမျက်လုံးတွေကစကားတွေ အများကြီးပြောနေသလိုပဲ...။ ကျွန်တော့်စိတ်တွင်းခံစားမှုကိုများ သူမကဖတ်တတ်နေတာလား....။
မြို့ထဲကို အမြန်ရောက်ပါတော့လို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်....မရောက်လဲ မရောက်စေချင်ဘူး...။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စီလမ်းခွဲသွားရတော့မှာ...။ သူမကပဲ အရင်ကားပေါ်ကဆင်းသွားမလား ကျွန်တော်ပဲ အရင်းဆင်းရမလားမသိပေမယ့်... လူကျပ်ကျပ်သိပ်သိပ်ကြားမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက သူမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းလို့ပဲ ထင်မှတ်မှားနေမိတော့တယ်...။ ကားထဲမှာ လူက လွှင့်လွှင့်မျောမျောနဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့ ခြေထောက်ကပ်မထားဘူးတောင် ထင်ရတယ်...။ ရင်ဘတ်ထဲဟာလာဟင်းလင်းနဲ့..... နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ရောက်တဲ့အထိ သူမတို့က မဆင်းသေး...။ ကျွန်တော်အပေါက်ဝမှာသွားရပ်ပြီး သူမကို တစ်ခန်ပြန်လှမ်းကြည့်တော့ ဗာဒံစေ့ပုံအလျားရှည်ရှည်နဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာအရည်လဲ့နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်...။ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်မျိုးလဲဗျာ....။.
ကျွန်တော့်နတ်သမီးလေးက ကျွန်တော့်ဆီကို အရိပ်ယောင်လေးပြရုံ တခဏလေး ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကိုရူးရူးမိုက်မိုက်ဖြစ်အောင်ထားရစ်ခဲ့တယ်....။ ခုလိုဖြစ်ရတာ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမလဲ ကျွန်တော့်မှာလည်းအပြစ်မရှိသလို သူမမှာလဲ အပြစ်မရှိဘူး........။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး တိုက်ခန်းရှိရာလမ်းထဲကို လျှောက်ဝင်လာလိုက်တယ်.....နေကလဲပူပြင်းလိုက်တာ..။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တော့ ကြည်ပြာရောင်နောက်ခံမှာ အဖြူရောင်တိမ်တောက်အထွေးတစ်ခု ပြေးလွှားနေလိုက်တာ..... ကျွန်တော့်အဖြစ်ပျက်ကလေးလိုပဲ တခဏအတွင်း အဲဒီတိမ်လိတ်တွေလဲ တစဆီလွှင်ြ့ပယ်ပျောက်ကွယ် သွားကြတယ်....။ သီချင်းစာသားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ်စာကြောင်းလေးလိုပဲ “I will never be with you” တဲ့ ...သိပ်မှန်တာပေ့ါ....ဘယ်လိုမှမဆုံနိုင်မယ့်သူတွေလေ ဘယ်လိုလုပ်အတူရှိနေနိုင်တော့မလဲ...။
♫ ♥●••·˙˙·••●♥♫ ♫ ♥●••·˙˙·••●♥♫
My love is pure. I saw an angel.
And I don't know what to do, 'Cause
မှတ်ချက်။ ။ James Blunt ရဲ့ “You're Beautiful” သီချင်းကိုနားထောင်ပြီး ဒီစာလေးကို စိတ်ကူးရေးသားဖြစ်ပါတယ်....။ ကော်နက်ရှင်ကြောင့် သီချင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မတင်ပေးတော့ဘူး လင့်လေးပဲချိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်....။
Posted by coral nyo at 02:26 12 comments: